विविध जानकारीहरुको संग्रह: डान्स रेष्टुरेण्टको डान्सर चिकियो
करीव १ महिना अगाडीको कुरा हो , म अफिसमा बसेर फेसबुक चलाउँदै थिए , अचानक मेरो कतारमा भएका एक जना मित्र कृष्ण कार्कीले मेसेज पठाए , “हेलो , के छ खबर ? कता हो अहिले ?” मैले “अफिसमा नै छु ।” भन्ने छोटो उत्तर दिए । “भोलि बेलुका मेरो नेपालको फ्लाईट छ , पर्सी बिहान १० बजे तिर नेपाल आई पुग्छु , भेटौ है त।” उनले मेसेज पठाए । “ए हो र , ल राम्रै भयो नि त , नभेटेको पनि ३ बर्ष भई सक्यो । ल ल भेटौ न त अनि धेरै गफगाफ गरौला ” मैले भने । “भई हाल्छ नि यार , साँच्ची यता तिर त केटीको अनुहार पनि देखिदैन यार , अब नेपालमै आएर रमाईलो गर्ने विचार छ , के छ गर्न पाईन्छ ?” उनले सोधे । मैले उनको मनसाय बुझिहाले, चिक्न नपाएर खप्पिस भाको रहेछ , अनि मैले ठाडो रुपमा उत्तर दिए ” तिमी आउ मात्रै न पहिले , म तिमीलाई राम्री राम्रो केटी र राम्रा राम्रा पुती भएको तिर लान्छु नि , अनि मजाले चिक्नु , हुन्छ ?” “जे होस मित्रले मेरो कुरा बुझेछ , ल ल हुन्छ , मलाई त अहिले नै औडाहा भई सक्यो यार , कहिले नेपाल पुगुँ जस्तो भई सक्यो ” उनले जवाफ फर्काए । “हतार नगर न यार , साह्रै गाह्रो भयो भने , एक – दुई चोटी छोलेर चित्त बुझाउन त , अनि यहाँ आए पछि रातभरी चिक्नु नि ।” मैले भने । ” ल ल , त्यसो भए अहिलेलाई बाई , घरको लागि सामान किन्न जानु छ , अब नेपालमै आएर कुरा गरौला ” भन्दै उ मसँग बिदा भए । ” ल ल बाई ” भन्दै मैले पनि विदा मागे । त्यसपछि दिनभरी अफिसमा व्यस्त भए र बेलुका घर तिर लागे । रातभर निद्रै लागेन , प्रियाको पुती चाटी चाटी चिकेको , रक्सी भट्टीको केटी चिकेको झलझली आँख अगाडी आई रह्यो । यता उता कोल्टे फेर्दा फेर्दै भुसुक्कै निदाएछु । एकासी बिहान ७ बजे आँखा खुल्यो र नित्य कर्म सकि फेरि अफिस तिर लागे ।
दिनभरी काममा व्यस्त भएको ले ४:३० भएको चालै पाईन , यसो घडी हेरेको त झसँगै भए , अनि हतार हतार सबै सामानहरू मिलाएर म गोंगबु तिर लागे । ठ्याक्कै ५ बजे म दिपेन्द्रको गेष्ट हाउसमा पुगे । कृष्ण त चिटिक्क परेर तयार भई बसेको रहेछ । “आई पुग्यौ , ल ल अब चाँडै लागौ ” कृष्ण ले भन्यो । मेरो मोटरसाईकल त्यँही राखेर हामी दुबै जना घुम्न लाग्यौ । गोंगबु तिर १ घण्टा जति घुमे पछि हामी ठमेल तिर लाग्यौ । “त्यसो भए आज मोबिल फेर्ने होईन त ? ” मैले सोँधे । “फेर्ने नि यार , पुतीमा चोपल्न नपाएर टेन्सन भई सक्यो यार , कति बेला पड्काउँ जस्तो भई सक्यो ” उसले उत्सुक हुँदै भन्यो । ” अब एकछिन पछि ठमेलको डान्स रेष्टुरेण्ट छिर्ने अनि त्यहीको माल पडकाउने नि ” मेले सहजै जवाफ दिए । ठमेल तिर घुम्दा घुम्दै झमक्क साँझ पर्न थालि सकेको थियो । बिदेशी सेता सेता अनुहार , काला काला अनुहारहरू यता उता घुम्दै थिए । नेपालीहरू पनि प्रशस्तै थिए । ठाउँ ठाउँमा लाँडो नै सनक्क हुने खालका नेपाली केटीहरू पनि प्रशस्तै देखिए , च्याप्प समाएर घोप्टो पारेर चिकीहालौ जस्तो । ठमेल चोक देखि अलि भित्रको एउटा डान्सबारमा हामी छिर्यौ । अँध्यारो कोठामा केवल रातो , हरीयो , नीलो बत्ती मात्रै बलेको , अनुहारनै चिन्न नसकिने लाईट । हामी भित्र मात्रै के छिरेका थियौ , २-३ जना केटीहरू हामी भएको मा आए अनि “जाउँ दाजु , उ त्यो सोफामा गएर बसौ , त्यँहाबाट डान्स गरेको प्रष्टै देखिन्छ ” भन्दै हात समाएर तान्न थाले । हामी दुबै ती केटीहरू सँगै सोफा भए तिर लाग्यौ । एउटा केटी मसँग बसी र अर्को कृष्ण सँग । अगाडी स्टेजमा ४ जना केटीहरू छोटो छोटो र पारदर्शी लुगा लाएर नाचीरहेका थिए , लाग्दथ्यो तिनीहरूलाई नाच्न आउँदैन थियो , केवल जीउ हल्लाई हल्लाई चलिमात्र रहेका थिए । छोटो स्कर्ट लाएकी एउटी केटी मेन्यु लिएर आई र सोधी “हजुरहरुलाई के ल्याउँ ?” मैले मेन्यु तिर हेरे जस्तो गरेर “खुकुरी रम १ क्वाटर , २ प्लेट चिकन चिली अनि १ प्लेट सलाद लिएर आउ , चुरोट पनि ५-६ वटा ल्याउनु है ” भने । त्यो केटी सरासर काउण्टर तिर गई । म सँगै छेउमा बसेकी केटीलाई “तिम्रो नाम के हो ?” भनी सोधेँ । “रश्मी ” भन्ने छोटो उत्तर दिई , “अनि तपाई को ?” भन्ने प्रश्न सोधी । “मेरो नाम ललित ” मैले भने । “अनि तपाईको घर कता पर्यो नि ?” उसले तुरन्तै अर्को प्रश्न राखी । ” मेरो घर त झापा हो , तर अहिले म यही बानेश्वरमा बस्छु , कलेज पढ्दैछु ” मैले भने । मेरा यी सबै कुरा झुठा थिए , किनकी यहाँका केटीहरूले पनि कहिल्यै सत्य बोल्दैनन् भन्ने मेरा साथीहरूले भनेका थिए । “ए , ए , अनि वहाँ दाईको घर चै कता पर्यो होला ?” मेरो साथी कृष्ण तिर देखाउँदै रश्मीले सोधी । ” मेरो घर पनि झापा नै हो , म आज बिहान मात्र फर्केको बिदेशबाट ” मेरो साथीले सहज र सही जवाफ दियो । ” हो र ? अनि हामीलाई के छ त कोसेली बिदेशको ?” हतार हतार खुशी हुँदै रश्मीले सोधीहाली । ” के को हतार नि , हामी भर्खर त आयौ , केही बेर सँगै बसौ , कुराकनी गरौ , चिनजान बढाऔ , कोसेली त दिई हाल्छ नि मेरो साथीले ” मैले जवाफ फर्काए । ” ल ल , हुन्छ , तर दिनु चै पर्छ नि फेरि ” रश्मीले जिद्धि स्वभावमा भनी । यतीकैमा अघिको वेटर बहिनीले हामीले अर्डर गरेको सबै लिएर आई । “अरु केही चाहिन्छ कि ?” टेबलमा खानेकुरा राख्दै उनले सोधी । “अहिले लाई यतिनै , चाहिएमा तिमीलाई बोलाउछु नि ल , धन्यवाद ” मैले भने । “हुन्छ , हुन्छ ” भन्दै उ अर्को टेबल तिर लागि । रश्मीले हाम्रो दुईवटै गिलासमा रम हालिदिई । करीब करीब ३-४ टेबलमा मात्र ग्राहकहरु थिए । स्टेजमा नाच्नै नजान्ने केटा केटीहरू चर्को स्वरमा बजेको गीतमा नाची रहेका थिए । ” ल ल , शुरू गरौ ” भन्दै मैले रम गिलासमा भएको रम पिउन शुरु गरे । कृष्ण सँग बसेको केटी चुपचाप बसेको देखेर मैले ” अनि बहिनीको नाम चै के हो नि ? किन चुपचाप बसेको ? साथीसँग गफसफ गर्नु नि , किन लजाको हौ ?” मैले जिस्काउँदै भने । ” मेरो नाम कृपा हो दाई , किन लजाउनु र ? दाई नै नबोली चुपचाप बसीरहनु भाको छ , त्यसैले नि ” उनले जवाफ फर्काई । “के हो यार तिमी , छेउमा यती राम्री बहिनी छे , यसो रमाईलो गफगाफ गर्नु पर्यो नि , कि तिमीलाई लाज लाग्यो ? लाज लागेको भए यो एक गिलास स्वाट्टै पार अनि सब लाजसाज हराउँछ , लु लु गिलास खाली गरौ ” भन्दै गिलास उठाएर एकै स्वाटमा सकिदिए । अनि २-३ टुक्रा चिकन चिली चपाउँदै रश्मी तिर हेर्दै भने , ” तिमीहरू चै के खाने नि ?” “हामीलाई बियर किनिदिनु न , हार्ड ड्रिङक त गर्ने बानी छैन ” सहजताका साथा जवाफ फर्काई । ” ल ल , जाउ २ बोतल वियर लिएर आउ ” मैले भने । साथी बिदेशबाट आको , खर्च त गर्ला नि भन्ठानेर मैले वियरको अर्डर पनि गरिदिए । एकै छिनमा २ बोतल वियर लिएर रश्मी आई र सँगै बसेर हामी चारै जना पिउन थाल्यौ ।
केही बेर पछि यसो कृष्ण तिर हेरेको त , केटीलाई अंगालो हालेर किस गर्दै रहेछ । ” ल ल , अब चै रमाईलो हुने भो है , बल्ल जोश चढेछ मेरो साथीलाई ” मैले भने । कृष्ण केही नबोली केटीलाई किस गर्दै बसी रह्यो । विस्तारै विस्तारै उसका हातहरू लुबा बाहिरबाटै कृपाको दुध माड्न थालेको देखे । मलाई पनि कता कता सनक चढेर आयो र रश्मीलाई भने “साथीहरू त शुरु भई सकेछन , हामी पनि शूरु गर्ने हो कि ?” रश्मी लजाउँदै मेरो अझ नजिकै सरी र म सँग टाँसिएर बसी । म पनि के कम , अंगालोमा हाले र किस गर्न थाले । लुगा बाहिरबाटै दुध माडन थाले , ओ हो , कति मजाको पोका , मिडियम साईजको , ठीक्क हात मा अटाउने । ” You are very beautiful ” मैले रश्मीको कानमा विस्तारै भने । “Thank You” उसले जवाफ फर्काई । एका तिर कृष्ण र अर्को तिर म किस गर्दै दुध माड्न थाले । अचानक गीत बन्द भयो , हामी पनि छुटियौ र स्टेज तिर आखा पुर्याए । एउटी राम्री केटीमा स्टेजमा थिई , कती राम्री देखेकी । हेर्दा मंगोलियन जस्ती , गोलो अनुहार , सानो सानो आँखा , आँखामा कालो गाजल , रातो लिपिस्टीक , छोटो स्कर्ट , कालो पातलो लेगिङग , टाईट टी-शर्ट , टी-शर्टमा देखिन ठिक्कको पोका ………… आहा कति राम्री …………… मेरो लाँडो त अचानक ठन्केर आयो । विस्तारै गीत बज्न थाल्यो , उ हल्लिन थाली । अरू भन्दा राम्रै नाच्ने रहिछ । “उ त्यो नाच्ने बहिनीको नाम चै के हो नि , कति राम्री है ” मैले रश्मीलाई सोधेँ । “उसको नाम नम्रता हो , राम्रो नाच्छे , मान्छे पनि साँच्चीकै राम्री छे ” रश्मीले भनी । अब त मलाई रश्मीलाई भन्दा पनि नम्रतालाई नै हेर्न थाले । पिउँदा पिउँदै ३ क्वाटर रम सकिएछ । ” के भो तपाईलाई , किन एकोहोर हुनु भाको , नम्रताले मोहनी लाई कि कसो ?” रश्मीको यो प्रश्नले म झसँगै भए । ” हो त नि , कति राम्री ” मैले भने । ” यहाँ बोलाईदिउँ त त्यसो भए ?” उनले सोधी । ” मान्छ भने बोलाउन त ” मैले भने । “त्यसो भए १००० को नोट हातमा राखेर बसी रहनु है त म त्यँहा गएर उसलाई भन्छु , उसले हेरे पछि पैसा देखाउनु है त , अनि उ आऊछे ” मलाई सिकाउँदै उ स्टेज तिर लागि । गीत पनि सकियो , रश्मीले नम्रतालाई केही भने जस्तो गरी , नम्रताले हामी भएको तिर हेरी । रश्मीले सिकाएको जस्तै मैले १००० को नोट देखाए । त्यसपछि नम्रता मुसुक्क हाँसी अनि स्टेज पछाडी तिर गई । केहि क्षणमै नम्रता हामी भएको तिर आएको देखे । उनी हाँस्दै मेरो छेउमा आएर बसी । “नमस्ते , सञ्चै हुनुहुन्छ ?” नम्रताले सोधी । ” नमस्ते , सञ्चै छु , अनि तिमीलाई कस्तो छ ?” मैले पनि हाँस्दै उनलाई सोधे । ” सञ्चै त छु , तर त्यही त हो नि हाम्रो काम , बेलुका आयो , राती सम्म नाच्यो , यस्तै छ ” नम्रताले जवाफ दिई । “तिमी के लिन्छौ ? बियर , रम ” मैले सोधै । ” म त वाईन लिन्छु , किनिदिनुहुन्छ ?” उनले सोधी । “हुन्छ हुन्छ , मगाउन त ” मैले भने । कृष्णलाई पनि परिचय गराई दिनुपर्यो भनेर यसो हेरेको त , दुईजना किस गर्नै मै व्यस्त । “एक छिन त छोड यार , के सारो हौ , ल यहाँ मेरो नयाँ साथी सँग परिचय गर ” मैले कृष्णलाई भने । ” नमस्ते , म नम्रता ” नम्रताले कृष्णतिर हेर्दै भनी । “नमस्ते , म कृष्ण ” मेरो साथीले पनि छोटो जवाफ दियो । ” ल ल , रमाईलो गर ” भन्दै म नम्रता तिर फर्के , अनि सोधे ” तिमी कहाँ बस्छौ ? को को छन घरमा ?” ” म त नयाँ बजार बस्छु , हामी यही काम गर्ने ३ जना साथीहरू मिलेर कोठा भाडामा लिएका छौ ।” नम्रताले जवाफ दिई । नम्रताले मगाको वाईन पनि आई पुग्यो र उनी पिउन थाली । “एउटा कुरा सोधौ ? नरिसाउनु ल ।” मैले चिक्ने मनस्थितीमा सोधे । “छ्या , किन रिसाउनु नि , सोधे भइ हाल्यो नि त ” अलि रिसाए जस्तो गरेर उनले भनी । “आज बेलुका म सँग जाउँन त , मेरो साथी कतारबाट आज आएको , हामी गोंगबुको गेष्ट हाउसमा बसेका छौ । आज उतै बसौ , भोलि बिहानै म तिमीलाई कोठामा पुर्याईदिन्छु नि , हुन्छ ?” मैले आँट गरेर सोधे । उ एकछिन चुपचाप बसी ……. अनि भनी , “हुन त हुन्छ , तर म एक्लै त नजाने ।” “ल ल , कृपालाई पनि लगौला नि त , हामी दुई जना छौ , तिमीहरू पनि दुईजना नि हुन्छ त ?” मैले सोधे । “एक पल्ट कृपालाई पनि सोध्नु न त ” उनले भनी । “कृपा आज नम्रता र तिमी हामी सँगै जाने ल गोंगबु , आज उतै बस्ने अनि भोलि बिहानै फर्कने , हुन्छ ?” मैले सोधे । “नम्रता जाने भए , जाने” कृपाले सहज उत्तर दिई । आज चै दामी पुती चिक्न पाईने भो भन्ठानेर मन खुशीले फुरङग भयो । यसो घडी हेरेको त १० बजी सकेको रहेछ । “अब जानु पर्छ हामी , ल तिमीहरू पनि तयार हौ ” मैले नम्रता र कृपालाई भने । “हुन्छ हुन्छ , हामी लुगा चेन्ज गरेर मेनेजर सँग कुरा गरेर आउँछौ ल ” भन्दै दुवैजना काउण्टर तिर लागे । यसो चारै तिर हेरेको त रश्मी एक्लै अँध्यारो मुख लाएर बसी राथी । मलाई माया लागेर आयो , शूरुमा उसँगै बसियो , बिचैमा छोडेर अर्कोलाई लिएर बसे ……… मेरो ‍मनै मानेन । मैले हातको ईशाराले उसलाई बोलाए । उ सरासर म भएको तिर आई । “किन बोलाउनु भाको दाई , नम्रता कस्तो लाग्यो ? म भन्दा राम्री छे है , त्यै भएर मलाई छेउमा नराख्नु भाको हो ” उनले पीडा भरिएको स्वरमा सोधी । “त्यस्तो होईन यार , किन त्यस्तो सम्झेको ? तिमी पनि त असाध्यै राम्री छौ नि । पछि फेरि आउँदा तिमी सँगै बस्छु नि , नरिसाउन ल ” भन्दै उसलाई सम्झाउन थाले । छेउमा बसाएर अंगालो हाली किस गर्न थाले । उ पनि मलाई किस गर्न थाली । उसको कानमा विस्तारै भने ,” आज नम्रता र कृपा हामी सँग जाँदैछ , म तिमीलाई भोलि लान्छु ल । प्लिज नरिसाउल ” “साँच्ची लाने हो भोलि , कसम ?” उनले सोधी । “कसम कसम , भोलि तिमीलाई लान्छु , तर म यँहा आउँदिन बाटोमा भेटौला अनि सँगै जाउँला ल , तिम्रो नम्बर देउन बरु, म भोलि बेलुका तिर फोन गर्छू ” मैले विश्वास दिलाउँदै उनलाई भने । ” ल टिप्नुस , ९८०३###### , मलाई भोलि ६ बजे तिर फोन गर्नु , म यहाँ बाट बिदा लिन्छु , अनि तपाईले भनेको ठाउँमा जाउँला ल” रूञ्चे स्वरमा मलाई भनी । “ल ल, हुन्छ , भोलि चै तिमी मेरो हौ नि है ” मैले भने । यतिकैमा नम्रता र कृपा तयार भएर आई । बिल तिरेर हामी सबैजना उठ्यौ । मैले रश्मीलाई फेरि एकपटक अंगालो हाले गालामा किस गरे “भोलि हामी जाने ल” भन्दै बाई गरे । उनले निन्यौरो अनुहारले मन नलागी नलागी हात हल्लाई । हामी सरासर बाटो तिर लाग्यौ , कृष्णले कृपालाई अंगालो हालेर हिडीराथ्यो , न‍म्रता चै मेरो हात समाएर हिडी राथ्यो । एउटा ट्याक्सी रोक्यौ अनि लाग्यौ गोंगबु तिर ।
१५-२० मिनेट पछि हामी गोंगबु गेष्ट हाउसमा पुग्यौ । सिधै कोठा तिर लाग्यौ । मैले साथी दिपेन्द्रलाई बोलाएर अर्को पनि एउटा कोठा मिलाईदिन भने । उसले ३०४ खाली छ भन्यो र चाबी ल्याई दियो । हामी चारै जना पहिलाकै कोठामा बस्यौ र बियर मगाएर पिउन थाल्यौ । करीब ११ बजी सकेको थियो र म उठ्दै भने ” ल अब हामी चै आफ्नै कोठा तिर लाग्यौ , तिमीहरू यही सुत है ।” नम्रतालाई अंगालोमा हाल्दै हामी बाहिर निस्कन थाल्यौ । ” ल ल , हुन्छ , मलाई पनि निद्रा लागेको जस्तो भयो ” कृष्ण ले भन्यो । ” के लागेको हला र निद्रा , सँगै कृपा छ , धेरै बेर चै नबस्नु नि ” मैले जिस्काउँदै भने र हामी बाहिर निस्क्यौ । ३०४ कोठाको चाबी खोलेर हामी छिर्यौ र बत्ती बाले । ट्यवलाईटको उज्यालोमा त नम्रता झनै राम्री देखेकी थिई । ढोका बन्द गरेर उनलाई च्याप्प अंगालोमा हालेर किस गर्न थाले । उनी पनि आँख चिम गरेर मलाई किस गर्न थाली । हामी दुईको मुख मुख जोडिएको थियो । कहिले म उसको जिब्रो चुस्थे , कहिले उ मेरो जिब्रो चुस्थी ……….. बिस्तारै बिस्तारै कपडा बाहिर बाटै उसको दुध माड्न थाले । देब्रे हात ले दुध माड्दै दाहिने हात बिस्तारै बिस्तारै उसको पुती तिर लगे । टाईट जिन्स पेन्ट लाएको ले उसको पुतीको महसुस गरि राथे । मेरो लाँडो पनि ठन्किएर पेन्टनै च्यातुला झै भइ राथ्यो । बिस्तारै मैले उसको टी-शर्ट खोलिदिए , अनि ब्रा पनि खोलि दिए । कडा कडा दुधको पोका, आहा मुखै रसाएर आयो र उसको दुधको मुण्टो चुस्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै दुधको मुण्टो जिब्रोले चलाउन थाले , उसलाई पनि असह्य भएछ , “आहहहहहहह………. सीसीसीसी…………… ओहहहहहहहहहहह” कराउन थाली । देब्रे दुध चुस्दा दाहिने दुध हातले माड्थे , दाहिने दुध चुस्दा देब्रे दुध …… यसरी नै १० मिनेट जती चुसी रहे । मलाई पनि अब खपि नसक्नु भईसकेको थियो । हतार हतार मेरो सबै लुगा खोले अनि नाङगै भए । उसको पनि पेन्ट खोल्न थाले । टाईट भएकोले मैले खोल्नै सकिन “आफै खोल न ” मैले भने । उनले आफ्नो पेन्ट सजीलै खोलि र पेन्टीमा मात्र मेरो अगाडी उभिई । फेरि अंगालो हाले र किस गर्न थाले । दुबै हात हरू दुधको पोका माड्न व्यस्त थिए । मैले उनको हात समातेर मेरो लाँडो तिर पुर्याए । उनले बिस्तारै बिस्तारै मेरो लाँडो खेलाउन थाली । म चै बिस्तारै बिस्तारै पेन्टी बाहिरबाटै उनक पुती खेलाउन थाले । पुक्क फुलेको पुती , हातमा महसुस भई राथ्यो । केही बेर बाहिरबाटै खेलाए पछि , उसको पेन्टी खोलिदिए । आहा ………… अहिले सम्म चिकेको मध्ये सबैभन्दा राम्रो पुती यहीनै जस्तो लाग्यो । हल्का कैलो कैलो भुत्तला , ट्याप्ट टाँसिएको मुख …….. छेउ छेउबाट अलि अलि पानी चुहि रहेको …………. कस्तो राम्रो पुती । बिस्तारै औलाले उको पुतीको मुख फटाए र यसो हेरको त , ओहो ………… सानो गुलाबी रङको टीसी , टीसी वरीपरि भिजेको ………. छेउछेउमा पुतीको भुक्क फुलेको भाग …………. पुती भनेको त यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो । मैले बिस्तारै नम्रतालाई खाटमा सुताए , उनको गालामा किस गरे , बिस्तारै बिस्तारै तल तल किस गर्दै गए । गालाम , घाँटीमा , छातीमा , दुधमा , भुँडीमा , नाईटो वरपर , तिघ्रामा , कापमा , खुट्टमा , पाईतालाम ……………. उनको शीर देखि पाउ सम्म किस गरे । मेरो किसको असर देखिई रहेको थियो । उनी “आहहहहहहहह…………… ओहहहहहहहहहहहहहह………… उहहहहहहहहहहहहहह…………. ससससस……….. ” गर्दै लामो लामो सास फेर्दै थिई । बिस्तारै म माथी तिर लागे र पुतीको वरी परी किस गर्न थाले । यहाँ किस गर्दा चै उसलाई खपि नसक्नु भएर क्यार ……. च्याप्प मेरो टाउको समाएर पुती तिर मेरो मुख लगी । उको पुतीबाट एक प्रकारको बासना आईरहेको थियो , बासनाले मेरो चिकाईको प्यास झनै बढाउन थालेको मैले महसुस गरे । उसले मेरो कपाल झन कस्सेर च्याप्प समाती , स्वाँ ……स्वाँ….. गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । मैले उसको दुबै खुट्टा फटाए , पुतीको मुख पनि खुल्यो । बिस्तारै पुतीमा मुख पु्र्याए र गुलाबी रङको टीसीलाई जिब्रोले खेलाउन थाले । उसलाई सारै मजा आएछ , आहहहहहहहहहहह आहहहहहहहहह कराउन थाली । जिब्रोले घरी टीसी , घरी पुतीको छेउ खेलाउन थाले । केहि क्षण पछि मेरो पुरै जिब्रो पुती भित्र छिराएर खेलाउन थाले । यसो गर्दा उसलाई झन असह्य भएछ , “मजा आयो , प्लिज यसरी नै गर्नु न एकछिन ….. आहहहहहहहहहहहहह …………..ओहहहहहहहहहहहहहहहहहह” म पनि लगातार उसको पुती चाट्न थाले , पुतीको पानी पिउन थाले । ५ मिनेट पछि म उठे र मेरो लाँडो लगेर उसको पुती छेउमा राखे । हातले लाँडो समाएर पुतीको वरीपरी खेलाउन थाले । “अब छिटो गर्नु न प्लिज , मलाई गाह्रो भईसक्यो …… प्लिज छिराउनुन ……. प्लिज ……. प्लिज………” उनी कराउन थाली । ” ल ल , अब गर्छु ” भन्दै बिस्तारै मेरो लाँडो पुतीमा छिराउन खोजे । शायद मेरो लाडो अलि मोटो भएकोले गर्दा होला या टाईट पुती भएकोले गर्दा हो , सजिलै छिरेन । मेरो पालो लाडोमा थुक दले र फेरि छिराउने प्रयास गरे । अहिले भने आधा जति छिर्यो । “ऐया दुख्यो , तपाईको त कत्रो मोटो रहेछ , बिस्तारै गर्नु है , मलाई पोल्न थाल्यो ” नम्रता कराउन थाली । “ल ल , बिस्तारै गर्छु ” भन्दै बिस्तारै बिस्तारै लाँडो छिराउन थाले । उनी “ऐया , आथा …..” कराउँदै थिई , म चै बिस्तारै बिस्तारै छिराउन थाले । अब चै पुरै लाँडो छिरी सकेको थियो , र नम्रता पनि ऐया …. आथा भन्ने कराउछ छाडी सकेकी थिई । म उसको दुध चुस्दै बिस्तारै बिस्तारै हल्लिन थाले , उ पनि मलाई च्याप्प समाउँदै तल बाट धकेल्न थाली । मेरो चिकाईको स्पीड बढ्दै गयो , जति स्पीडले चिक्थे , उनी पनि कराउन थाल्थी “आहहहहहहहहहहह…………. ओहहहहहहहहहहहहह………… सीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ …………… उहहहहहहहहहहहहहहहहहह………………. अझै……….. अझै……….. कस्सेर ………….. कस्सेर…………..” उसको हेरक आवाजले मलाई चिक्ने हौसला दिईरहेको थियो । म बल गरी गरी चिक्न थाले । केही क्षण चिके पछि , मैले उसलाई उठाए अनि घोप्टो पर्न लगाए । ” अब यसरी गर्ने ल ” मैले भने । “हुन्छ , तपाई त खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ है , मलाई आज जस्तो मजा कहिले आको थिएन ।‍ अहिले सम्म ५ जना जति सँग सुति सके , तर तपाईले जस्तो माया गरेर कसैले चिकेको थिएन । जो पनि कोठामा लाने , लुगा खोल्ने अनि छिराई हाल्ने । तपाई त कति माया गर्नु हुन्छ है । मलाई त तपाईसँगै बसु बसु लाग्यो । I LOVE YOU ” उनले मायालु स्वरमा भनी । ” I LOVE YOU TOO” मैले पनि उत्तर फर्काए । उ घोप्टो परिसकेकी थिई , मैले बिस्तारै उसको पुतीमा मेरो लाँडो छिराउन थाले । “ऐया , यसरी गर्दा दुख्ने रहेछ , बिस्तारै गर्नु है ” उनले भनी । “हुन्छ हुन्छ , बिस्तारै गर्छु ” भन्दै उनको पुतीमा लाँडो छिराए । पुक्क फुलेको पुतीमा घोप्टो पारेर चिक्नुको मजा नै बेग्लै हुने रहेछ । मैले बिस्तारै बिस्तारै चिकाईको रफ्तार बढाउँदै गए , उनी पनि मलाई साथ दिदै गई । १० मिनेट जति चिके पछि ” मेरो त झर्न लाग्यो नम्रता , भित्रै झारौ को बाहिर ?” मैले सोधे । “यस्तो मजा आउने गरि चिकिरानु भाछ , भित्रै झारिदिनु , म आनन्द महसुस गर्न चाहन्छु , बरु भोलि दबाई खान्छु , प्लिज गर्नु न ” नम्रताले अनुरोध गर्न थाली । मेरो पालो झन बल गरेर कस्सी चिक्न थाले । १०-१५ चोटि हल्लिए पछि , मेरो माल झर्ला जस्तो भयो र एक चोटि कस्सेर धक्का दिए , मेरो माल ह्बात्तै निस्कयो , मेरो पाईतालाबाट जमीन नै झरे जस्तो भयो , म उनको ढाँड माथी ड्वाङ ढले । उनी घोप्टो परेर बसी रही म उनको माथी लडी रहे । थाकेर लोत भाको थिए , हलका चीसो मौसममा पनि पसिनै पसिना भाको थियो हामी दुबैको जीउ । म पनि स्वा……… स्वा….. गर्दै थिए , उनी पनि स्वा….. स्वा ……… गर्दै थिई । ५ मिनेट जति यतिकै बसे पछि , म उसको छेउमा पल्टे , उनी पनि उतानो परी । मलाई अंलागो मा हाल्दै ” I LOVE YOU, आज म धेरै खुशी छु तपाईसँग यसरी बस्न पाउँदा ………… आज जस्तो रमाईलो मलाई कहिले आको थिएन ……… हुने भएत म सँधै तपाईसँग यसरी नै बसी रहन्थे । बरु मलाई केहि चाहिन्न , मसँग तपाई यसरी नै बस्नु न , हुन्छ ?” उनले मायालु स्वरमा भनी । ” सँधै भरी त म भन्न सक्दिन , तर तिमीलाई ईच्छा लागेको बेला मलाई फोन गर्नु , म आउँछु , र तिमी सँगै बसौला । मौका मिल्यो भने नगरकोट तिर घुम्न जाउँला नि , २-३ दिन उतै बस्ने गरी , हुन्छ ?” मैले उसलाई किस गर्दै भने । “हुन्छ ” छोटो उत्तर दिई र फेरि मलाई अंगालोमा हाली र किस गर्न थाली ।
Posted by विविध यौन जानकारीहरुको संग्रह at 10:55 PM
saagr magar September 4, 2014 at 11:34 PM
saagr magar September 4, 2014 at 11:39 PM
saagr magar September 4, 2014 at 11:41 PM
saagr magar September 4, 2014 at 11:42 PM
adiba akter November 13, 2014 at 12:10 AM
मेरो पुती भित्र पसायो